जम्ला त केमेस्ट्री ? - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः कार्तिक २७, २०७४ - साप्ताहिक
जम्ला त केमेस्ट्री ?
श्वेता खड्कालाई दर्शकले श्रीकृष्ण श्रेष्ठकी पत्नीका रूपमा चिन्छन् । त्यसो त उनको आफ्नो बेग्लै पहिचान पनि छ, चलचित्र अभिनेत्री एवं उद्यमी महिलाका रूपमा । होटल तथा क्याफेहरूकी सञ्चालिका श्वेता
श्रीमान्को असामयिक निधनपछि केही समय शून्यमा थिइन् । ठूलो शोकबाट बाहिर आउन उनलाई झन्डै डेढ वर्ष लाग्यो ।
श्रीकृष्णले अवलम्बन गराइदिएको बाटो अर्थात् अभिनयकर्ममा उनी फेरी पुरानै जोस–जाँगरका साथ फर्किएकी छिन् । श्वेता आफैंले निर्माण गरेको चलचित्र ‘कान्छी’ लगभग तयार भैसकेको छ । पर्दामा उनलाई अभिनेता दयाहाङ राईले साथ दिएका छन् । चलचित्र ‘कान्छी’को एउटा गीतको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ जसमा श्वेता र दयाहाङले राम्रोसँग नाचेका छन् ।
राजनराज शिवाकोटीको शब्द तथा संगीतमा राजनका साथ अञ्जु पन्तले गाएको मौलिक शैलीको उक्त गीतमा दयाहाङ राईले आफ्नो चलचित्र करियरकै सबैभन्दा राम्रो नृत्य गरेका छन् । श्वेता र दयाहाङको जोडीले पर्दामा राम्रो केमेस्ट्री प्रस्तुत गर्ने संकेत उक्त गीतले देखाएको छ ।
जम्ला त रोमान्स ?
जोडी जम्ला ?
जम्ला त जोडी ?
उहाँ नृत्यमा कमजोर हुनुहुन्छ